Qaabka Kaymaha Ficus
Qaabka xididka Ficus
Taiwan bonsai qaab
Ololaha Dahabka Sansevieria
Muquuninta Baasaboorka Gaaban
Bamboo Tawaar-nasiib leh / Bamboo Lakab / Tallaabo Bamboo
Bamboo Toosan Oo Toosan
Pachira hal jir ah
Qaab ciyaareedka Bougainvillea
Dhirta kale ee Bonsai
Ubaxyo macmal ah
Fujian Ubaxa iyo Dhoofinta Dhirta ayaa sare ukacay sanadka 2020
Waaxda Dhirta Fujian waxay shaaca ka qaaday in dhoofinta ubaxyada iyo dhirta ay gaartay US $ 164.833 milyan sanadka 2020, koror ka yimid 9.9% marka loo eego 2019. Waxay si guul leh "ugu rogtay xiisadaha fursado" waxayna ku gaareen koboc joogto ah dhibaatada. Qofka mas'uulka ka ah Fujian Kaymaha Depa ...
Goorma ayey dhirta dheryuhu beddelaan dheryaha? Sidee loo beddelaa dheryaha?
Haddii dhirtu aysan wax ka beddelin dheriyada, koritaanka nidaamka xididku wuu xadidnaan doonaa, taas oo saameyn ku yeelan doonta koritaanka dhirta. Intaa waxaa dheer, carrada dheriga ayaa sii kordheysa la'aanta nafaqooyinka iyo hoos u dhaca tayada inta lagu jiro koritaanka geedka. Sidaa darteed, ku beddelashada dheriga midigta ...
Maxay Ubaxyo Iyo Dhirtuba Ka Caawinayaan Inaad Caafimaad Qabtid
Si si wax ku ool ah loogu dhuuqo gaasaska waxyeellada u leh gudaha, cholrophytum waa ubaxyadii ugu horreeyay ee lagu kori karo guryaha cusub. Chlorophytum waxaa loo yaqaan "sifaynta" qolka, oo leh awood nuugid rasmi ah oo caadi ah. Aloe waa geed cagaaran oo dabiici ah oo qurxiya kana nadiifiya envi ...
La-talin Bilaash ah 0086-15280616591
Cinwaanka 4 # 1406 JINPIN GARDEN, JINFENG SOUTH ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, ZHANGZHOU CITY, CHINA